Somaliland: Cali-Guray Oo Madaxweynaha Ugu Baaqay Inuu Kala Diro Wasiirradiisa, Walaacna Ka Muujiyey Guddiga Qaadhaan-ururinta 18 May - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Cali-Guray Oo Madaxweynaha Ugu Baaqay Inuu Kala Diro Wasiirradiisa, Walaacna Ka...
Cali Maxamed Yuusuf (Cali-Guray) oo wakhtigan ka tirsan Xisbi-xaakimka Kulmiye, ayaa Madaxweynaha Somaliland Axmed-Siilaanyo ugu baaqay in uu kala diro Golaha Wasiirrada Xukuumaddiisa ee Tiradoodu Toddobaatanaadka gaadhay, kuwaas oo uu ku eedeeyey inay masuul ka yihiin Sicir-bararka iyo qiimaha Sarrifka Doollarka ee Cirka isku shareeray.
Waxa uu Cali-Guray sheegay in Xukuumadda laga rabo siyaasad dhab ah oo aan been-been iyo malo-awaal ku dhisnayn. Waxa uu Cali-Guray ka digay Guddiga Qaadhaan-ururinta 18 May ee uu Madaxweyne Siilaanyo magacaabay oo uu ku tilmaamay inaanay qorshe cad oo lacagtaas lagu ururiyo ahayn, balse ay tahay in lacag laga macaasho iyo daba-goosigii ugu dambeeyey ee Lacag-urursi.
“Meesha Lixdan Wasiir ee Nin waliba wax doonayaa ee intaas oo Hay’adood oo Been ah oo waxay Ummadda u qabtaan jirin soo maaha dawladdu inay is-yarayso? Maanta Madaxweynuhu Musharrax maaha, hadduu yidhaahdo waar Saddexda Xisbi kala gala oo nin waloowbay kii hadhaw Wasiir kaa dhigaya raac oo uu 12 Qof oo Farsamo yidhaa waa Wasiirro oo uu innoo soo reebo, Sicir-bararkaa waxbaa laga qaban karayaa. Haddaanay iyagu dhinacoodii tallaabo qaadayn oo wixii iyaga khuseeya daynaysanayaan, hadhawna eedda saarayaan Ninka Miskiinka ah ee Baayac-mushtariga ah, Ganacsatadu way sheegeen waxa keenaya inay Muceeshaddu qaali noqoto qiimo-dhaca Shilinka Somaliland.” Sidaa ayuu yidhi Cali-Guray.
Siyaasi Cali-Guray waxa uu Walaac ka muujiyey Kalsoonida lagu qabi-karo Guddiga qaadhaan-ururinta Abaaraha ee 18 May Madaxweyne Siilaanyo u magacaabay, waxaanu yidhi; “Lacag Ururiyo oo Jeebabka lagu sito oo Niman la socdaan oo waxay doonaan iibinayaan maaha, waa kuwo la doonayo in lagu soo saaro Natiijooyin. Waxaan leeyahay Dadka arrintaa Masuulka ka noqonayoow Illaahiinna ka baqa, Allaah wuu inna arkayaa, kor waxaynu u leenahayna wuu inna maqlayaa, waxa hoose ee Uurkeenna ku jirana Allaah wuu ogyahay.”
“Hadday sheekadiinnu tahay daba-goosigii ugu dambeeyey iyo in lacag laga macaasho Dadkaas Abaaraha ku tabaaloobay ee u baahan gargaarka oo ay qaar ka doonayaan Mashaariic oo ay qaar ka doonayaan Qandaraasyo oo ay qaar ka doonayaan Lacag ay lunsadaan, Xoolo iyo Fooqaq ay dhistaan, Illaahay baa taa idinkala xisaabtami doona. Laakiin, ma suuragalayso inay Wadaaddo iyo Siyaasiyiin intay iyagu curiyaan Barnaamij, iyaga oo aan iyagu ahayn Farsamo-yaqaanno ay daafici karaan.” Sidaa ayuu yidhi Cali-Guray oo Waraysi siiyey shalay Horn Cable TV.